Madaxweyne Shariif oo Masuuliyiin iyo Dadweyne badan Salaada Ciida ku dujiyay Masjidka Isbaheysiga(Daawo Sawirada) - iftineducation.com
aadan21 / August 19, 2012
iftineducation.com – Madaxweynaha Dowlada KMG ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa Maanta Boqolaal qof oo isugu jira Masuuliyiin katirsan Dowlada KMG ee Soomaaliya iyo dad Shacab ah ku dujiyay Masjidka Isbaheysiga ee Magaalada Muqdisho.
Masuuliyiinta Masjidka ku dukaneysay ayaa Waxaa kamid ahaa Raizul Wasaaraha Xukuumada Waqtigiisa sii dhamaaneyso ee Cabdi Wali Gaas iyo Qaar kamid ah Golaha Wasiirada Xildhibaano iyo Masuuliyiin kale oo katirsan Dowlada.
Waxaa sidoo kale Masjidka ku sugnaa Saraakiil katirsan ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Musliiinta ah oo halkaasi ku dukanyay iyo qaar kamid ah Safiirada Dalalkooda u jooga Magaalada Muqdisho.
Dadweyne fara badan ayaa sidoo kale Masjidka kusugnaa kuna dukaday Salaada Ciida waxaana halkaasi ku dujiyay Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidoo kale Qudbad dheer ka jeediyay oo ku saabsaneed Munaasabada Ciida.
Amaanka Masjidka ayaa si ada ah waxaa u adkeenayay Ciidamo katirsan Dowlada KMG ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dadka baarayay kahor inta aysan masjidka galin iyadoona amaanka ahaa mid aad u heer sareeyay.
Maanta ayaana Magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Gobolada Dalka si isku miod ah looga ciiday iyadoona dadku ay ahaayeen kuwo aad ugu faraxsanaa iskugna hambalyeenayay farxada iyo Munaasabada Ciida.
Weeraryahan Robin van Persie oo ku biiray kooxda Man Utd (Daawo Wareeysi Muuqaal ahaan muxuu yiri)